Hyde Park, valan-javaboary any London | Vaovao momba ny dia
Hyde Park, valan-javaboary any London
Ny valan-javaboary dia mandravaka ny tanàna ary toerana tsara handehanana, mijery ny gadon'ilay toerana ary miala sasatra mandritra ny fitsangantsanganananay. Amin'ny Londres misy maromaro, fa ny iray amin'ireo malaza indrindra dia tsy isalasalana Hyde Park.
Hyde Park Izy io dia valan-javaboary misy tantara sy hetsika maro, ka raha mitsidika an'i Londres ianao amin'ny fahavaratra dia afaka mankafy azy io, na dia, araka ny lazainay hatrany aza, mora ny mahafantatra tantara sasany hahafahanao mankasitraka tsara ny zava-drehetra. Ka anio, miaraka aminao, Hyde Park, kintana maitso any Londres.
1 Hyde Park, ny tantarany
2 Inona no hitsidika ny Hyde Park
Hyde Park, ny tantarany
Nisy fotoana katolika i Angletera, saingy tamin'ny fotoana nanjakan'i Henry VIII niova mandrakizay izany. Ity mpanjaka ity dia nanapaka ny fifandraisany tamin'ny Papa, namela ny heriny ary tao anatin'izany no nametrahana ny fananana ara-piangonana rehetra: abbeys, mansions, plantations ary ny hafa.
Noho izany, tamin'ny 1536 tao anatin'ny rafitr'ity programa fakana an-keriny ity ny satro-boninahitra naka ny tranon'i Hyde sy ny taniny izay, hatramin'ny nisian'ny fanafihana Norman, dia teo am-pelatanan'ny moanina Benedictine. Ny tany dia nanana serfa ary tany nihaza ihany, nefa rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nisokatra kokoa mandra-pahatongany tamin'ny 1637 dia nosokafana ho toy ny valan-javaboary fampiasan'ny besinimaro izy io.
Tamin'ny fotoana nanjakan'i George II, ny endrika voalohany dia natao tamin'ny valan-javaboary.e, ho an'ny Queen Consort Caroline avy any Brandenburg- nsbach. Nifarana tamin'ny 1733 ny sangan'asa fa tsy izy ireo ihany satria taty aoriana, tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia namboarina ny farihy bibilava ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX no nanomboka nisy asa hafa niaraka tamin'ny fitomboan'ny London sy ny Fanjakana Britanika .
Avy eo ny Grand Entrance dia natsangana niaraka tamin'ny tsanganana Ionic sy andohalambon'ny kalesiny, 33 metatra eo alohany, miaraka amin'ny vavahady varahina sy vy namboarina toy ny honeysuckle amin'ny fomba tsara tarehy. Noho izany dia nanjary nalaza teo amin'ireo olom-pirenen'ny renivohitra Anglisy izy ary nanomboka teo dia tsy nitsahatra namiratra izy io.
Inona no hitsidika ny Hyde Park
Ao amin'ity valan-javaboary ity no Fahatsiarovana an'i Diana of Wales, loharano famoronana maoderina izay manahaka ny renirano fa tsy loharano, ary notokanan'ny Mpanjakavavy Elizabeth II tamin'ny 2004. Namboarin'ilay mpanao mari-trano amerikana Kathryn Gustafson izy io ary endrika boribory iray misy granite 545 misy rano mikoriana avy amin'ny lafiny roa eo ambony izay latsaka ao anaty dobo kely iray etsy ambany.
Azonao atao koa ny mahita ny farihy bibilava, farihy artifisialy izay eo amin'ny faran'ny atsimo amin'ny valan-javaboary ary tonga hatrany amin'ny zaridainan'i Kensington na dia antsoina hoe Long Water aza izy io. Niorina tamin'ny baikon'ny Mpanjakavavy Carolina, vady araka ny nilazanay momba an'i George II, tamin'ny 1730 ary ankehitriny dia malaza be amin'ny filomanosana sy lakana io.
Tranonkala malaza hafa koa ny Speaker's Corner. Ny lazan'ity zorony ity dia efa taonjato roa ary toerana malaza hihaonana. Hifamotoana eto ny olona miresaka politika ary namoaka azy ireo foana ny polisy, ka tamin'ny farany dia nisy toerana noforonina mba hahafahan'ny olona miteny malalaka. Ka isaky ny alahady dia mijoro eo ambony boaty ny olona ary afaka maneho hevitra malalaka amin'ny resaka politika, fivavahana na inona na inona. Ny zavatra momba ilay boaty dia satria, voalaza, fa tsy tokony hisy fitsikerana miakatra amin'ny tany anglisy.
Laharana lo Any atsimon'ny valan-javaboary izy io ary misy lalan-tany lava lava sady lava, enina kilometatra ny halavany, izay ampiasaina ankehitriny ho an'ny hazakazaka sy mitaingina soavaly, fa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia lalana nampiasain'i King William III. Toa tsy nilamin-tsaina ny mpanjaka nandeha tongotra avy tao amin'ny Lapan'i Kensington ka hatrany amin'ny lapan'i Saint James ka nametraka jiro solitany teny amoron'ilay lalana namorona ny jiro voalohany teto amin'ny firenena. Amin'ny farany ity lalana du rosendra lo aho.
El Andohalambo Marbra Manakaiky ny Speaker's Corner izany. Tany am-piandohana dia natsangana tamin'ny 1827 ho iray amin'ireo fivoahana tao amin'ny Buckingham Palace saingy nafindra tamin'ny toerana misy azy io tamin'ny taona 1851. Namboarin'i John Nash fanta-daza izay naka aingam-panahy avy amin'ny Arch of Constantine any Roma. Fananganana malaza iray koa ny Sarivongan'i Achilles, ny lehibe indrindra ao amin'ny Hyde Park, napetraka tao tamin'ny 1822 ho fanomezam-boninahitra ny Duke of Wellington noho ny fandreseny an'i Napoleon tao Waterloo.
Raha ny marina, ny varahina an'ny sarivongana dia nalaina avy tamin'ny tafondro frantsay voasambotra tamin'ny ady isan-karazany ary aingam-panahy avy amin'ny famolavolana ny sarivongan'i Castor sy Pollux ao amin'ny Piazza del Quirinale any Roma. Androany dia sarivongana somary liana izy satria mitondra lambam-pandriana manarona ny taovam-pananahana ary napetraky ny puritanisme anglisy izay taitra rehefa nahita ny fitanjahana. Sarivongana bebe kokoa ao amin'ny valan-javaboary? Afaka mandeha mihaona amin'ny Fahatsiarovana 7/7 izay vao haingana kokoa raha mahatadidy ireo niharan'ny herisetra tamin'ny taona 2005, miaraka amina andry vy 55.
Eo koa ny Hazo fanavaozana, mozika mainty sy fotsy mozika fotsy tamin'ny 2001 nanamarika ny toerana misy ny hazo terebinta iray nirehitra tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 1866. Fahatsiarovana hafa dia nahatsiaro an'i William Henry Hudson, mpanoratra sy mpandala ny natiora, iray hafa an'i Saint George sy ny dragona ary misy koa ny sarivongan'i Isis, telo metatra ny haavony, eo akaikin'ny farihy. Ary tato ho ato dia nisy zaridaina raozy natsangana izay tsy manam-paharoa ao amin'ilay valan-javaboary satria toerana maitso maitso izy, ary kely loko.
El Rose Garden Any amin'ny zoro atsimo atsinanan'ny valan-javaboary no misy azy ary misy pergola sy loharano roa, ny Artemis Fountain 1822 sy Sarivongan'ny zaza sy ny feso nanomboka tamin'ny 1862. Ary farany, raha tianao ny loharano dia mbola misy iray hafa ao amin'ny valan-javaboary, ny Joy of Life font voaravaka sarivongana varahina, boribory sy sakany, misy sarivongana zaza efatra. Noforonin'i Thomas Husxley - Jones tamin'ny 1963.
Fampahalalana azo antoka momba ny Hyde Park
Toerana: Central London, Westminster.
Size: 138 hektara
Ora: misokatra manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 12 alina.
Ahoana ny fomba hahatongavana any: amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka 2, 6, 7,8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 30, 36, 38, 52, 73, 74, 82, 137, 148, 274 , 390, 414 ary 436. Amin'ny fantsom-pifandraisana amin'ilay tsipika Piccadilly miainga ao amin'ny Hyde Park Corner sy Knightsbridge na eo amin'ny tsipika afovoany midina amin'ny Marble Arch sy Queensway.
Size: 138 hektara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Hyde Park, valan-javaboary any London
Isla Mágica, vala misy lohahevitra ao Seville